८१ वर्ष पुग्दा पनि घाँसखेती गर्दै टेक बहादुर, कमाउछन् वार्षिक ४ लाख…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ ! – Nepal Online Khabar
८१ वर्ष पुग्दा पनि घाँसखेती गर्दै टेक बहादुर, कमाउछन् वार्षिक ४ लाख…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
स्याङजा : यी हुन टेक बहादुर थापा मगर । विगत ४३ वर्षदेखि घाँस खेती गर्दै आइरहेका टेकबहादुर अहिले पनि पुरानै जोश-जाँगरका साथ घाँस खेती गरिरहेका छन् । समय सापेक्ष घाँस खेती गर्दा राम्रो आम्दानी हुँदै जान थालेपछि उनले विभिन्न प्रजाजिका घाँसका बीउ लगाएर ठूलाे भएपछि काटेर बेच्ने गरेका छन् ।
उत्पादन नहुने जग्गाको सदुपयोग गर्दै ७ रोपनी जग्गामा घाँस खेती गरेका टेक बहादुरले घाँसबाट मात्रै वार्षिक ४ लाख कमाउने गरेको बताए । पछिल्लो समय कृषि गर्नेको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि आफ्नो व्यवसाय झनै फस्टाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
व्यावसायिक रुपमा भैँसी, बाख्रा पाल्ने कृषकहरू जग्गाको अभावमा घाँस खेती गर्न नसकेपछि उनीसँग घाँस किनेर लाने गरेको सुनाए । उनले राइ खनायो, सिओ थ्रि, सियो फो, किम्बु, लेमनग्रास लगायत २३ प्रजातिका घाँस उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । उनीले उत्पादन गरेको उन्नत प्रजातिको घाँस बाग्लुङ, पोखरा, बुटवलसम्म बेच्ने गरेको सुनाए ।
विदेशमा अर्कोको जागिर खानुभन्दा उत्पादन गरेर अरुलाइ खुवाउनु घर्म हुने भन्दै आफूले यो पेशा सुरु गरेको उनको भनाइ छ । कृषिमा आत्मनि’र्भर नभए देश अगाडि बढ्दैन भन्ने सोचका साथ ४३ वर्ष अगाडीदेखि कृषि कर्म गर्दै आइरहेका टेक बहादुरसँग अरुले पनि केही सिक्न जरुरी छ ।
Prevचिनियाँ राष्ट्रपति सी भन्नुहुन्छ : नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको विकास आफ्नो उच्च महत्वमा छ…हेर्नुहोस् ।
Nextमेगा बैंकको १८ लाख कित्ता शेयर बिक्री खुल्ला…हेर्नुहोस् ।
अस्पतालले दिएन बेड, नवजात शिशु र सुत्केरी आमा चिसो भूईँमा सक्दो सेयर गरि संबंधित निकाय सम्म पुर्याउनुहोला ।
५५ रुपैयाँमा ३ दिन सम्म अनलिमिटेड युट्युब हेर्न पाउने नेपाल टेलिकममा ? कसरी लिने त यो अफर…हेर्नुहोस ।